MAYELANA NE-EPONT JACK - I-Best Engine Crane Kanye Ne-Floor Jack Manufacturer
Siwine izitifiketi eziningi zomkhiqizo wethu ngokwekhwalithi kanye nokuqanjwa okusha.
I-Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngo-2006.
Etholakala enkabeni yedolobha lebhande lezomnotho emfuleni iYangtze, iJiaxing, lapho iseduze neShanghai, Hangzhou, Ningbo, idolobha laseSuzhou, njll, elilungele kakhulu izinto zokuhamba.
Le nkampani iyiqoqo le-Engine Crane ehlukahlukene, i-Floor Jack 3T, i-Floor Transmission Jack eyinhlangano eyisipesheli yebhizinisi yokucwaninga, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza nokudayisa.
Le nkampani ihlanganisa indawo 17000 square metres, inkampani ukuthatha "Idumela esekelwe, izinga kuqala" ifilosofi yebhizinisi, ukunikeza amakhasimende imikhiqizo izinga, kancane kancane, yokusungula idumela elihle embonini, isikali ibhizinisi liyakhula. YIPENG kholwa ngokujoyina kwakho, kuzoba nekusasa elingcono, kholwa yi-YIPENG, khetha i-YIPENG, joyina i-YIPENG, sizokunikeza isevisi engcono kakhulu nesiqiniseko.